Nayakhabar.com: चौथा प्रेमीसँग २० दिन लामो डेटका लागि सुटुक्क न्युजिल्याण्ड उडिन नम्रता !
चौथा प्रेमीसँग २० दिन लामो डेटका लागि सुटुक्क न्युजिल्याण्ड उडिन नम्रता !
काठमाडौं । चकलेटी नायिका नम्रता श्रेष्ठ प्रेमी दावा स्टीभन शेर्पासँग अहिले डेटिङमा ब्यस्त छिन् । उनीहरुको जोडी लामो डेटका लागि न्युजिल्याण्ड पुगेको खबर सार्वजनिक भएको छ ।
काठमाडौंबाट सञ्चालित एक मनोरन्जन साइटले उनीहरु गत शनिबार मात्र २० दिन लामो गोप्य डेटका लागि न्युजिल्याण्ड निस्किएको समाचार सार्वजनिक गरेको हो । ‘यो जोडी २० दिन लामो बिदा मनाउन न्युजिल्याण्ड उडेको छ,’ मनोरन्जन साइट मेरो सिनेमा डटकमले लेखेको छ, ‘उनीहरु न्युजिल्याण्ड डेटिङलाई गोप्य राख्न चाहन्छन् ।’
पछिल्लो समय यो जोडी डेटमा रमाइरहेको छ । नम्रता र दावा स्टीभन काठमाडौंदेखि सगरमाथा आधार शिविरसम्म डेटमा रमाइरहेका छन् । दावा स्टीभनले आफ्नो फेसबुकको कभर तस्विर नै सगरमाथातिर खिचिएको नम्रताको तस्विर राखेका छन् भने प्रोफाइल फोटोमा नम्रतासँग खिचिएको तस्विर छ ।
दावा उनका चौथा धनाढ्य प्रेमी हुन् । यसअघि उनको तीन जनासँग ब्रेकअप भइसकेको छ । अग्लो जिउडाल र विदेशी जस्ता देखिने स्टिभन शेर्पा र नम्रता झण्डै एक वर्षदेखि रिलेसनमा छन् ।
आखिर को हुन् विदेशी लुकका स्टीभन ?
३२ वर्षीय दावा स्टीभन शेर्पा पेशाले पर्यटन ब्यवसायी हुन् । उनले स्कटल्याण्डको हेरिओट–वाट विश्वविद्यालयबाट बिजनेश एडमिस्ट्रेशनमा डिग्री गरेका छन् । उनी डच, नेपाली, अंग्रेजी, हिन्दी र जर्मन गरी पाँचवटा भाषा बोल्न जान्दछन् ।
सगरमाथा आधार शिविरमा सर्वाधिक उचाइँमा रहेको वेकरीको मालिक समेत हुन् उनी । परिवारको माइला छोरा उनका बाबु नेपाली पर्यटन ब्यवसायिक आङछिरिङ शेर्पा र आमा बेल्जियमकी नागरिक हुन् । उनले दुई पटक सगरमाथाको आरोहण समेत गरिसकेका छन् ।